PressReader - Ilanga langeSonto: 2018-03-25 - BEKUGCWELE KOWAMA-IDOLS
Ilanga langeSonto - 2018-03-25 - Izindaba - LUCKY CAIN
USUPHENDUKE isibonelo nakwamanye amazwe umncintiswano waminyaka yonke wokuthungatha umzwilili ovelele, obizwa nge-idols SA, okhonjiswa kumabonakude esiteshini esingaphansi kwe-dstv, imzansi Magic.
Ngokuthola KWELANGA Langesonto i-idols SA yiyona ehamba phambili ngezibalo zabangenelayo nezamavoti uma sekuvotelwa abangenelile kwi- top 16. Leli phephandaba liphinde lahabula ukuthi njengoba lo mncintiswano ubuvaliwe e-united States of America (USA), iminyaka emibili, abadidiyeli bawo bathole ithuba lokuzobona indlela oqhutshwa ngayo eningizimu Afrika.
Umdidiyeli omkhulu wama-idols SA, ugavin Wratten, ukuqinisekisile ukuthi lo mncintiswano usahamba phambili uma kuqhathaniswa nakwamanye amazwe. “Yithina esesiqhubeke isikhathi eside kunamanye amazwe kanti isibalo samavoti sangonyaka owedlule siqophe umlando njengoba sithole amavoti angaphezulu kwezigidi ezingu-90,” kusho ugavin.
Udalule ukuthi imfihlo yempumelelo yabo yizinhlobo zabantu bakuleli nesiteshi umzansi Magic asichaze njengesivuleleke kuwona wonke umuntu.
Kuleli sonto lo mncintiswano, ozoqala ukukhonjiswa kumabonakude ngonhlangulana (June), ubuhlunga abaculi abazongena kwi- top 16, ewild Coast Casino, eport Edward. Kuvele ukuthi ikhono liyaqhubeka nokumangalisa njengoba nesibalo sabangenelile nonyaka besiphezulu kakhulu. Bangaphezulu kwama-90 kwabangenele abathola amathikithi okwedlulela esigabeni esilandelayo kwinhlolokhono yokuqala ebiyenzeka emadolobheni ahlukene.
Abantu abathole ithuba lokubona okokuqala abanye babancintisana kulo nyaka baphume bengawuvali umlomo ngekhono abalibonile ewild Coast lapho bekuhlungwa khona itop 16.
“Senginabo abayimfivilithi yami nakuba ngingavumelekile ukubasho manje,” kusho unokuthula Mjwara othole ithuba eliyingqayizivele lokubona kuqala abadlulele esigabeni esilandelayo kulo mncintiswano ewild Coast. I-idols ihamba phambili ekukhiqizeni abaculi kuleli njengoba nabangawudli umhlanganiso begcina bevelela. Phakathi kwabatholakale kule nhlolokhono, ngukhaya Mthethwa, ulloyd Cele, u-elvis Blue, u-amandla Black, ummatema Moremi, umusa, ukarabo nabanye. lucky.cain@ilanganews.co.za